Instagram ကမကြာခင်မှာ hashtag ကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် Androidsis
Instagram ပေါ်တွင် hashtag ကိုလိုက်နာခြင်းသည်မကြာမီဖြစ်နိုင်သည်
Instagram သည်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအရှိဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည် နောက်ဆုံးသောကာလ၌။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဓာတ်ပုံလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုဝယ်ယူပြီးကတည်းကတိုးတက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည် ၎င်းသည်လူထုနှင့်အလွန်ရေပန်းစားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Snapchat မှသူမကိုပိုနှစ်သက်သောလူငယ်ပရိသတ်များအကြား.
ဖေ့စ်ဘွတ်ကလူမှုကွန်ယက်အတွက်သတင်းတွေဆက်ပေးနေတယ်။ မကြာမီကပင်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မကြာခင်မှာပဲ က Instagram ကိုအပေါ် hashtag ကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့် hashtag အသုံးပြုသောမည်သည့်ထုတ်ဝေမှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့မလွတ်သွားပါ။ ဒီ feature အသစ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကိုလိုက်နာသကဲ့သို့ hashtag ကိုလိုက်နာပါ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် hashtag ကိုအသုံးပြုပြီးရရှိသောစာပေများကိုအစဉ်လိုက်နိုင်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် အချို့သောခေါင်းစဉ်သတိထားပါ။ ဒါကြောင့် Instagram မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးသတင်းကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုလိုသော hashtag ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ #love, #selfie or #food စသည့်အသုံးများဆုံးသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါကကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းသည်စာပေများနှင့်ပြည့်နေမည်မဟုတ်။ ဒီပို့စ်များကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် Instagram ကို Instagram ကစီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ်လတ်တလောမြင်လိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင်, အခုဒီ function ကိုသုံးစွဲသူအနည်းငယ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုအဆင့်၌ရှိနေပြီး၎င်းတွင်ပါသောမအောင်မြင်မှုများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတယ် Instagram ကိုစတင်မိတ်ဆက်ကြောင်း filtering သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းကိုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဘာမျှမပြောရသေးပါ။
သော်လည်း အရာအားလုံးကလာမယ့် Instagram update ကိုအတူရောက်လာလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပျက်သင့်သောအရာ။ ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်းလွန်းမရှည်သင့်ပါတယ် ဒီ function ကလွယ်ကူတယ်။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာလိုသော hashtag ကိုရိုက်ထည့်ပါ နှင့်လျှောက်လွှာကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုပါတယ် hashtag သုံးပြီးလူကြိုက်အများဆုံးစာပမြေားကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းသောနည်းလမ်း သင်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားသောခေါင်းစဉ်များကိုလိုက်နာပါ. ဒီအင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Instagram ပေါ်တွင် hashtag ကိုလိုက်နာခြင်းသည်မကြာမီဖြစ်နိုင်သည်
Pixel2XL ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောနောက်ဆုံးပြproblemနာသည်မျက်နှာပြင်၏အစွန်းကိုသက်ရောက်သည်